inkonzo Car - lena ibhizinisi, okwathi ngokuhamba kweminyaka lakhula ngokushesha ngempela, okufunekayo has amahle. Ngaleso sikhathi samanje ukuba esikhundleni inani elikhulu imoto amapaki, iziteshi service abanamakhono beza ngubani final e-ukubhonga, uhlinzeka ezinhle amasevisi ezingeni ukulungisa ngamanani ezifanele.
Amathrendi we yesimanje zosizo igxile kakhulu yokuthi wakhulela imikhumbi kudinga inkonzo bafaneleka kangcono futhi ukulungisa. Ukuze STO kwaba yimpumelelo futhi inzuzo, idinga umholi onokwethenjelwa futhi abanekhono. Inketho engcono kuleli cala - ungumuntu owazi mathupha umsebenzi esiteshini, futhi yasebenza esiteshini. Ukuze uthole inhlangano enjalo ikhanda zasemsebenzini ngoba isisebenzi ngasinye esinekhono, futhi ube nesiqinisekiso sokuthi konke kuzokwenziwa kahle futhi njengoba kahle ngangokunokwenzeka.
Ngaphezu kwalokho, ngo-khona okwamehlela njengomphathi kuyoba lula ukulawula izinga umsebenzi wokulungisa, kanye nenzuzo zalesi sihlahla. Futhi inhlangano efanele zasemsebenzini inendima enkulu emiphumeleni yokugcina. Active ingxenye ekuhleleni ukukhiqizwa uchwepheshe abanekhono ukwakha iqembu lochwepheshe ukunikeza izinsiza eziseqophelweni eliphezulu futhi wenziwa endaweni ebanzi amakhasimende base.
Umholi Labor STO akukuniki ethize quantifiable, iqhaza layo ekuthuthukiseni kunjalo akunakwenzeka ukulinganisa, ngoba konke lapha kugcinwa kuso. Inhlangano okunengqondo obala emsebenzini kuyokhumbuza ekudambiseni anda ukucindezeleka kwengqondo, ngoba umsebenzi wakhe - lokhu akulona nje kuphatfwa kwemitfombolusito yeluntfu, futhi kudingeka senze izinqumo ezibalulekile nokusebenza esikhathini esifushane.
Umqondisi we umsebenzi esiteshini engqondo futhi kuhilela ezinde ze-non-nokukhawulela ngosuku obekusetshenzwa ngalo. inhlangano Ofanele emsebenzini ngeke kuphela ukusiza ukusebenza ngempumelelo, kodwa uyophinde ube nomthelela omuhle umfanekiso lonke esiteshini. Akusiyo imfihlo ukuthi ukuze inhlangano ukuba baphumelele, kufanele elihle phakathi amakhasimende.
Yini ehlanganisiwe isimiso ethize inhloko STO? Imihlangano kanye nemihlangano akhawunti-65% of the time, amakholi wefoni - mayelana 6%, ukubuka imibhalo - 22%, imoto ukuhlolwa 7%. Ukuqatjhwa ezingafakwanga kuhlelwe, Okunye okufanele kucatshangelwe indlela, futhi kuthatha cishe 7%, eholidini empeleni ebangela% 2 kuphela isikhathi. Inhlangano okunengqondo obala emsebenzini kuyokhumbuza ukuthambisa isheduli elukhuni iziteshi ikhanda.
Kufanele kube kahle ngokomthetho. Emsebenzini futhi kusikisela inhlangano kolwazi ukuphepha kanye umphathi siqu zokuphepha. Umqondisi ithebula isethi, ngokuvamile isicabha noma kancane obliquely.
Uma ubhekene naleso iklayenti, kufanele ubone ngokucacile impumelelo yakho. Uma kuhlelelwa ehhovisi ukushiya indawo omuhle ezembula impumelelo yomuntu siqu emkhakheni zokukhiqiza. Hang ehhovisi amahle, nombala ofanayo ifreyimu ngesitifiketi iziteshi yokubhalisa, diploma ukukhushulwa ehlukahlukene.
Qinisekisa ukuthi isitifiketi esiteshini wayengekho ezivelele, kodwa nge fresh sokuvuselela usuku. Uma usebenza nge izinkampani zomshuwalense, wagqoka okufanayo odongeni amaphepha asenza nawe isivumelwano nokubambisana. Gcizelela lezi ukuthi uyasazisa njengoba amaphepha izinga mculi. Qaphela ukuthi abasebenzi bayanxuswa ukuba STO ezikhethekile izifundo futhi ube izitifiketi ezifanele, njengoba ijubane ukuthuthukiswa kanye impumelelo esiteshini sevisi ngqo wakhona zincike ukutholakala kwabasebenzi abaqeqeshiwe.
Inhlangano kanye nemisebenzi esiza kusikisela ukuba khona kwesimo sezulu esihle, futhi ikakhulukazi lokushisa kanye nomswakama imibandela. Good air conditioning, humidifier futhi ionizer.
Emsebenzini Inhlangano futhi ihlanganisa ukwenziwa ukukhanyisa ezanele. It elaligcwele indlu nge kwelanga yemvelo kwandisa umsebenzi ukusebenza. Uma ukukhanya akwanele, ukufaka amandla angeziwe nge elithambile ukukhanya dim, ukukhanya unamathela ezindinganisweni.
Inhlangano kanye nemisebenzi esiza kusho ukuvikelwa ukulahlekelwa ulwazi oluyimfihlo ngokuqondile esiteshini enhloko hhovisi.
Ukuze ukuqaphela zonke ezintsha yezimoto kanye ukuvumela zokuxhumana okusheshayo nabalingani, uzodinga umholi omuhle, kanye ne-software yesimanje. Kubalulekile ukudluliselwa invoice, ukulethwa amanothi, izibalo nokubambisana tekusebenta ne izinkampani zomshuwalense kanye nabo ebhizinisini.
Ukuxazulula ngokushesha izikhathi ukusebenza esiteshini, udinga umsebenzi kahle ehlelekile ngocingo futhi radio yezokuxhumana phakathi ukulungisa izitolo kanye Umdwebo ekamelweni. Kungcono ukushintshela umqondisi, ngenxa yakhe, ungakwazi ukukhuluma ochwepheshe eziningana ngesikhathi esisodwa. Ungakwazi futhi ukuthi uhlele ukuthi kwesekelwe ngokulondoloza umshini wokuphendula.
esiteshini Manual futhi ngabasebenzi balo abafanelekayo, ngosiko , futhi amanani ezifanele - lezi izimfuneko okumelwe bahlangabezane nazo iziteshi yesimanje, futhi kuncike umuntu ophethe.